Blog – Page 2 – BIRMADDUU
Waaqayyoo Amma Jireenya Guutuu Akka Jiraannu Fedha
Jireenya Dhimma Baasuu
Jireenya Maatii Kiristiyaanaa
“15 Warra isaa wajjin maaddiitti taa’an keessaa tokko, kana yommuu dhaga’e Yesusiin, “Maaddii mootum¬maa Waaqayyootti kan dhi’aatu ay-yaantuu dha” jedhe*. 16Yesus garuu, “Namni tokko cidha guddaa isaa go-dhatee, namoota baay’ees waame. 17Yeroon nyaataa yommuu ga’e, ‘Am-ma kottaa hundinuu qophaa’eera’ je¬dhee warra waamaman haa yaadachii-suuf hojjetaa isaa itti erge. 18 Warri waamaman garuu hundumti isaanii, ‘Akka itti dhufnu hin qabnu’ jedhanii hojjetichatti dhimma garaa garaa hima-chuu jalqaban.
yeroo garaa garatti fayyuu duwwaa otuu hin taane hafuuraa fi deddeebiin
guddachuuti akka waamane dhugaa nuuf
ba’a. Phwuloos waldaa warra efessoniif yeroo barressu boqonnaa hafur keessatti
dubbiidhuma kana cimsee akkas jechuun dubbata.